ज्योति मगरले किन लेखिन् यस्तो सन्नीका बारे ?
फिल्म ‘पासवर्ड’ को प्रिमियरका लागि हालै अभिनेत्री सन्नी लियोन नेपाल आइन् । उक्त नेपाली फिल्ममा उनको आइटम डान्स समावेश थियो । त्यसैले फिल्म निर्माण टिमसँगै फिल्म हेर्न उनी प्रिमियर सोमा उपस्थिति भइन् । तर, नेपाली गायिका ज्योती मगरलाई भने सन्नीप्रति देखाएको पाहुना सत्कारले मन पोलेको शुक्रबारको साप्ताहिकले लेखेको छ ।
सन्नीको स्वागतमा रेड कार्पेट विच्छ्याइएको थियो । उनको स्वागतका लागि लाखे नाँच पनि देखाइएको थियो ।
त्यसैले सहन नसकेर होला ज्योतिले फेसबुक स्टाटस लेखिन् ‘गोकुल वाँस्कोटाले बन्द गराएको इन्टरनेट साइटहरुको हिरोइन नेपाल आएको रैछ । पन्चकन्या र लाखे नाँचले स्वागत । अनि स्टाटस जान्छ नेपालका पत्रकारहरु जसले ज्योति मगरलाई भल्गर भन्दै न्यूज लेख्नुहुन्छ ।’
स्टाटस्ले ज्योति पनि सन्नीलाई जस्तै सम्मान चाहान्छिन् । तर खै त यहाँका पत्रकारले ज्योतिलाई लाखे नाँचसहित स्वागत गरेको ?
कलाकार नविना सिल्वालले ल्याइन् ‘देश बचायौ’ गिती एल्वम
१२ जेठ, काठमाण्डौं । हास्यकलाकर्मीको क्षेत्रमा निकै चर्चा कमाएकी नबिना…
मनिषा कोइरालाले नेपाली भूमिमा भारतीय हस्तक्षेपबारे बोलेपछि भारतीय मिडियाले भने-‘खाते भारतका गीत चीनका गाते हे’
७ जेठ, काठमाण्डौं । भारतले नेपाली भूमिमाथि गरेको हस्तक्षेप र…
दिवेश पोखरेल बने अमेरिकन आइडलको फस्ट रनर अप
दिवेश पोखरेल अमेरिकन आइडलको उत्कृष्ट ७ मा
गिनिज वल्र्ड रेकर्डस निपेश ढाकाको ‘मिलानकोली’ गीत युटुयुवबाट सार्वजनिक
अस्ट्रेलियाबाट बिमोचनको ‘तिम्रो याद’ले गीत सार्वजनिक